PersonalDNA - Mombamomba ny toetranao | Martech Zone
Talata, Novambra 28, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ny namako iray dia manao tsinontsinona ny fitsapana toetra manokana. Tena tiako izy ireo, saingy tsy mahazo aina amin'ny fanapahan-kevitra momba azy ireo. Manana mpampiasa mampiasa ny fanandramana hampivelarana ekipa aho ary hahafantatra ny fifandraisan'ny olona ao amin'iny ekipa iny amin'izy ireo. Nofanina tamin'ny fomba ofisialy Fandrosoana Iraisam-pirenena, Mahafinaritra ahy ny mandinika ny fitsapana ny toetra amam-panahy ary tsy mampiasa azy ireo hanombohana ny fifandraisana miasa. Rehefa niasa tamin'ny orinasa niofanana izahay, dia nandaitra ny fitsapana satria naterak'izy ireo izany fampandrosoana manokana ny fomba nifandraisantsika tamin'ny hafa.
Rehefa nifindra tany amin'ny mpampiasa teo aloha aho izay tsy nanahirana fiofanana akory, ny Myers-Briggs andraso ny fahafantarana iray hafa izay nampiasaina nanohitra anao. Mora kokoa amin'ny mpitantana ny manao fialantsiny tsy mitarika rehefa afaka mamantatra fitsapana toetra manokana izy ireo. Mivadika sakantsakana fa tsy fitaovana. Ny tsy fahazoana angon-drakitra dia mety hiteraka fanapahan-kevitra ratsy kokoa noho ny tsy fananana angona mihitsy. Hitantsika hatrany izany tamin'ny fandatsaham-bato, fanadihadiana tsy dia novolavolaina tsara, vondrona ifantohana ratsy ary famakafakana malemy. Ny fitsapana ny maha-olona dia tsy misy hafa. Ny fametrahana titre mpitantana na mpanara-maso aminao dia tsy midika hoe hainao ny mitantana na manara-maso ary tsy midika velively izany hoe afaka mamakafaka ny fitsapana ny toetran'ny olona ianao hanovana ny fomba fiaraha-miasa amin'izy ireo. Izay no antony heveriko fa mankahala azy ireo ny namako… ary tsy manome tsiny azy aho. Tahaka ny fangalako boky biolojika hanaovana fandidiana aminao, hatoky ahy ve ianao? Heveriko fa tsia.
Izany dia nilaza fa tena tiako ny tatitra nataon'ny PersonalDNA sy ny hevitr'izy ireo mifototra amin'ny fandefasanao. Ny intuitive dia tena intuitive tamin'ny fisafidianana ny valinteninao, gaga aho amin'ny fahaizan'ny fampiharana azy ireo. Ary koa, ny tatitra vita dia marina ary, indrindra indrindra tsara. Ampy ny fampahalalana handokoana ny sarinao, saingy tsy dia be loatra ny mety hahazakan'ny olona anao izany vaovao izany. Zahao hoe
ny tatitra momba ahy manokana Dna hahita anao.
Mpitarika Animated… Tiako izany!